इपीएलको उपाधि जित्नेले पाउने ट्रफी सार्वजनिक, कसले जित्ला? :: PahiloPost
इपीएलको उपाधि जित्नेले पाउने ट्रफी सार्वजनिक, कसले जित्ला?
6th December 2018 | २० मंसिर २०७५
काठमाडौँ : यही शनिवारदेखि सुरु हुने एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपीएल) २०१८ को विजेताले पाउने ट्रफी सार्वजनिक भएको छ।
आयोजक इपीएल प्रालीमा प्रवन्ध निर्देश आमिर अख्तर स गत वर्षको विजेता विराटनगर वारियर्सका टिम मालिक विशाल अग्रवालले ट्रफी सार्वजनिक गरे।
कार्यक्रममा इपीएल खेल्ने ६ वटै फ्रेन्चाइज टिमका कप्तान उपस्थित थिए। यस्तै सहभागि टिमका मालिकहरु पनि उपस्थित थिए।
साविक विजेता विराटनगर वारियर्स, साविक उपविजेता भैरहवा ग्लाडिएटर्ससँगै ललितपुर प्याट्रिओट्स, काठमाडौँ किंग्स ११, पोखरा राइनोज र चितवन टाइगर्सले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको साविक विजेता वारियरसले ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको प्याट्रिओट्‍सबीच उद्घाटन खेल हुनेछ।
यस पटक ठूला नामका विदेशी खेलाडीहरु सहित पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चियरलिडर्सको आगमनले यस पटकको इपीएल गत वर्षको भन्दा ठूलो बन्ने आयोजकको दावी छ।
'हामीले इपीएललाई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फ्रेन्चाइज टुर्नामेन्ट बनाउने योजनामा छौँ। राम्रो विदेशी खेलाडीहरु आएका छन्। पहिलो पटक चियरलिडर्स ल्याएका छौँ। आयरल्याण्ड, भारतबाट कमेन्टेटरहरु आउनुभएको छ। पक्कै पनि यस पटक इपीएल मच बिगर हुनेछ।' अख्तरले भने।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो टी-२० लगि बनाउने भएपनि अख्तरले प्राइज मनी भने खुलाएनन्। उनले प्रतियोगिता सुरु हुनु बेला प्राइज मनी घोषणा गर्ने बताए।
यसैगरी प्रतिस्पर्धी ६ वटै टिमका कप्तानले इपीएल खेल्न उत्साहित भएको बताउँदै तयारी पनि राम्रो भइरहेको प्रतिक्रिया दिए।
यस पटक ठूला नानमका विदेशी खेलाडीहरु आएकोले इपीएल अझ राम्रो हुने कप्तानहरुको विश्ववास छ।
साथै सबै टिमका कप्तानले प्रतियोगितामा राम्रो खेल्दै उपाधि जित्ने नै लक्ष्य रहको बताए।
गत वर्ष भन्दा यस पटक तीन टिमको कप्तान परिवर्तन भएको छ। चितवन टाइगर्सको कप्तानमा पृथु बास्कोटा भने काठमाडौँ किंग्सको कप्तानमा सोमपाल कामी छन्। यस्तै पोखरा राइनोजले स्कटल्याण्डका कप्तान केल कोत्जरलाई नै कप्तान नियुक्त गरेको छ।
ट्रफी सार्वजनिक समारोहले पोखरा राइनोजको कप्तानको रुपमा कोत्जर उपस्थित थिए र उनले नै इपीएलमा टिमको कप्तानी गर्ने जनाएको छ।
यसअघि चितवनको कप्तान दीपेन्द्र सिंह भरी थिए भने काठमाडौँले गत वर्ष श्रीलंकाका फरभेज महारुफलाई कप्तानी दिएको थियो। यस्तै पोखराको कप्तानमा भेट्रान स्पिनर शक्ति गौचन थिए।